Gịnị ka Baịbụl Kwuru Gbasara Nchegbu?
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bengali Bislama Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese (Shanghainese) Chinese (Sichuanese) Chinese (Yunnanese) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish French Georgian German Greek Gujarati Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kannada Kazakh Kikaonde Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lingala Lithuanian Luganda Luvale Macedonian Malagasy Malayalam Maltese Marathi Myanmar Nepali Norwegian Oromo Pangasinan Polish Portuguese Punjabi Quechua (Ayacucho) Quechua (Cuzco) Romanian Russian Samoan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tahitian Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tok Pisin Tsonga Turkish Twi Ukrainian Urdu Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
Nchegbu dị ụzọ abụọ. E nwere nke na-enyere mmadụ aka, nwee nke na-emebi ihe. Baịbụl kwuru otú anyị ga-esi amata ha abụọ.
Mmadụ ichegbu onwe ya ọ̀ dị njọ?
Obi anaghị eru onye na-echegbu onye ya ala. Otú ihe si dịrị n’ụwa a nwere ike ime ka onye ọ bụla n’ime anyị chegbuwe onwe ya.
Eze Devid kwuru na o nwere mgbe mkpụrụ obi ya nọ na-agba mgba, ya ana-erukwa uju ụbọchị niile. (Abụ Ọma 13:2) Gịnị nyeere Devid aka? O kpere ekpere, kọọrọ Chineke otú obi dị ya. Obi sikwara ya ike na Chineke ga-enyere ya aka. (Abụ Ọma 13:5; 62:8) Chineke na-agwakwa anyị ka anyị kọọrọ ya mkpa anyị. Baịbụl kwuru, sị: ‘Tụkwasịnụ ya nchegbu unu niile, n’ihi na ihe banyere unu na-emetụ ya n’obi.’—1 Pita 5:7.
Imere ndị ikwu na ibe anyị ihe ga-eme ka anyị ghara ịna-echegbu onwe anyị maka ha
Ma, o nwere ihe ụfọdụ mmadụ nwere ike ime ka nchegbu ya belata. Dị ka ihe atụ, Pọl onyeozi gbara mbọ kasie ndị ya na ha na-efekọ Chineke obi ma gbaa ha ume mgbe ihe gbasara ha nọ na-echu ya ụra. (2 Ndị Kọrịnt 11:28) Nchegbu ahụ ọ nọ na-enwe bara uru n’ihi na o mere ka o nyere ụmụnna ya aka. Anyịnwa nwekwara ike ime ka ya. A sị na o mere ka ọ gbasaghị ya, ọ garaghị enwe ike inyere ha aka.—Ilu 17:17.
Gịnị ka ị ga-eme ma ọ bụrụ na ị na-echegbukarị onwe gị?
Ndị mmadụ nwere ike ịna-echegbu onwe ha maka ego, ihe ndị ha mejọrọ n’oge gara aga, ma ọ bụkwanụ maka otú ihe ga-adị n’ọdịnihu. *
Mmadụ ichegbu onwe ya maka ihe o mere: N’oge ochie, o nwere ụfọdụ Ndị Kraịst bụbu ndị aṅụrụma, ndị na-apụnara mmadụ ihe, ndị na-akwa iko, na ndị ohi. (1 Ndị Kọrịnt 6:9-11) Kama ịnọ na-echegbu onwe ha n’ihi ihe ndị ahụ ha mere n’oge gara aga, ha gbanwere ma nwee obi ike na Chineke ga-agbaghara ha. Abụ Ọma 130:4 kwuru, sị: “Ezi mgbaghara dị n’aka gị [Chineke].”
Amaghị ihe echi ga-abụ: Jizọs sịrị: “Unu echegbula onwe unu mgbe ọ bụla maka echi, n’ihi na echi ga-enwe nchegbu nke ya.” (Matiu 6:25, 34) Ihe Jizọs na-ekwu n’amaokwu a bụ na anyị kwesịrị ilekwasị anya naanị n’otú ihe si dịrị anyị n’ụbọchị. Anyị ekwesịghị iburu nsogbu dịịrị echi tụkwasị na nke taa n’ihi na o nwere ike ime ka anyị mee mkpebi na-enweghị isi. O nwedịrị ọtụtụ ihe nwere ike ịna-echu mmadụ ụra, e mechaa, onye ahụ achọpụta na ihe ndị ahụ ekwesịghị ịna-echegbu ya.
Ego: Otu onye ma ihe rịọrọ Chineke si: “Emela ka m daa ogbenye, enyekwala m akụnụba.” (Ilu 30:8) Ihe ọ rịọrọ Chineke bụ ka o mee ka ihe ọ bụla ya nwere ju ya afọ, nke bụ́kwanụ ihe ga-eme ka ya na Chineke dịrị ná mma. Ndị Hibru 13:5 gwara anyị sị: “Ka ụzọ ndụ unu bụrụ nke ịhụnanya ego na-adịghị na ya, ka unu nọ na-enwe afọ ojuju n’ihe ndị dị ugbu a. N’ihi na o kwuwo, sị: ‘M gaghị ahapụ gị ma ọlị, m gaghịkwa agbahapụ gị ma ọlị.’” Onye nwere ego taa nwere ike ịbụ ogbenye echi. Ma, Chineke anaghị ahapụ ndị tụkwasịrị ya obi ma nwee afọ ojuju n’ihe ọ bụla ha nwere.
“Ahụbeghị m ka a hapụrụ onye ọ bụla bụ́ onye ezi omume kpamkpam, ahụbeghịkwa m ụmụ ya ka ha na-arịọ nri.”—Abụ Ọma 37:25.
Ò nwere mgbe nchegbu ga-akwụsị?
N’afọ 2008, otu akwụkwọ akụkọ kwuru na nchegbu ga na-arị ibe ya elu ka chi na-abọ na-aga. N’afọ 2014, otu akwụkwọ akụkọ a na-ebi n’Amerịka kwukwara na ọtụtụ ndị Amerịka na-echegbu onwe ha.
“Ọ bụ nchegbu nke dị n’obi mmadụ ga-anyịgbu ya, ma, ọ bụ okwu ọma na-eme ka ọ ṅụrịa ọṅụ.” (Ilu 12:25) Ị manụ na “okwu ọma” dị n’ozi ọma gbasara Alaeze Chineke. (Matiu 24:14) N’oge na-adịghị anya, Alaeze ahụ, ya bụ, ọchịchị Chineke, ga-eme ihe anyị na-anaghị emeli. Ọ ga-eme ka ihe niile na-eme ka ndị mmadụ na-echegbu onwe ha kwụsị. Ọ ga-ewepụ nrịrịa na ọnwụ. Chineke kwere anyị nkwa na ya ‘ga-ehichapụ anya mmiri niile n’anya anyị, na ọnwụ agaghị adị ọzọ, iru uju ma ọ bụ mkpu ákwá ma ọ bụ ihe mgbu agaghịkwa adị ọzọ.’—Mkpughe 21:4.
“Ka Chineke onye na-enye olileanya mee ka unu jupụta n’ọṅụ niile na udo niile n’ihi na unu kwere ekwe.”—Ndị Rom 15:13.
^ para. 10 Onye ọ bụla oké nchegbu na-akpaghasị ahụ́ nwere ike ịga hụ dọkịta. Teta! anaghị ekwu na ọ bụ otú a ma ọ bụ otú ọzọ ka e kwesịrị isi agwọ ọrịa.
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Nchegbu